BlocPower Wants To Evict Fossil Fuels One Building At A Time –
BlockPower aasaasihii Donnel Baird waxa uu ku koray xaafadda Bedford-Stuyvesant ee Brooklyn 198-tii. Aaggu aad buu u liitay oo dhismayaashu inta badan ma lahayn habab kuleyl oo wanaagsan. Dadku waxay shidi doonaan shooladda ama waxay isticmaali jireen kuleyliyeyaasha korontada si ay u magdhabaan kuleyliyaha dhexe ee aan waxtarka lahayn.
Ma ahayn mid ammaan ah ama waxtar leh, laakiin waxay ahayd xaqiiqo qoysas badan, oo intooda badan ahaa Madow, kuwaas oo ku noolaa dhismayaashaas cilladaysan. Baird wuxuu sheegay in dareenka sinnaan la’aanta iyo sinnaan la’aanta xaaladdu ay ku dhegtay isaga. Markii uu koray, waxa uu garwaaqsaday in dhibaatadu ay ka jirto xaafado badan oo danyar ah, taas oo saameyn ku yeelatay tayada nolosha dadka ku nool halkaas iyo sidoo kale waxyeello u geystay deegaanka ballaaran.
Waxa kale oo jiray shay kale oo ciyaarta ku jiray. Dad badan oo ku noolaa isla xaafadahaas ayaa soo wajahday shaqo la’aan hufan, taasoo sii hurinaysa faqriga oo ay adagtahay in laga gudbo. Baird kaliya ma uusan dooneynin inuu bedelo nidaamyada aan waxtarka lahayn ee gubay shidaalka fosil, wuxuu sidoo kale rabay inuu abuuro shaqooyin tayo sare leh, oo xasiloon oo loogu talagalay dadka ay inta badan ka tageen dhaqaalaha.
Waxa uu bilaabay BlocPower sanadkii 2014 isaga oo hadafkiisu ahaa in lagu badalo nidaamka kulaylinta iyo qaboojinta gubista shidaalka fosil ka nadiif ah, wax ku ool ah bambooyin kulaylka isha hawada korontada, kululeeyayaasha biyaha iyo baalal qoraxda. Laga bilaabo Janaayo, BlocPower waxay cusboonaysiisay in ka badan 1,200 dhisme oo ku yaal 26 magaalo, shaqaduna way sii socotaa.
Halkaa marka ay marayso, shirkadu waxa ay ururisay in ka badan $100 milyan. Waxaa ka mid ah in ka badan $50 milyan oo ka timid Goldman Sachs si ay u caawiyaan dib u maalgelinta dhismaha cagaaran ee shirkadda, iyo sidoo kale $30 milyan oo maalgelin ah oo ka Sanduuqa Hal-abuurka Cimilada ee Microsoft. Iyada oo ay taasi jirto, waxa uu la kulmay dagaal culus marka ay timaado dhaqaale ururin, waxana uu si halis ah ugu dhawaaday in uu albaabada u xidho shirkadda 2018-ka.
Waxaan kala hadlay Baird caqabadaha uu la kulmay furitaanka ganacsiga, gaar ahaan aasaasihii Madoow, ku qancinta waaxda maaliyadda iyo maal-qabeenada si ay u taageeraan aragtidiisa oo ay fikradiisa dhulka uga saaraan.
1 Dhisida beddelka cagaarka ah
2 Ka degista dhulka
3 Horey u riixayaan
Dhisida beddelka cagaarka ah
Xididdada fikradda waxa noqday BlocPower waxay bilaabatay markii Baird uu ka shaqaynayey barnaamij shaqo oo cagaaran oo ay la socoto Waaxda Tamarta ee xilligii Obama. “Shaqadaydu waxay ahayd in aan u dhaqmo sidii dhexdhexaadiye ka baxsan Wasaaradda Tamarta iyo kooxo badan oo ka mid ah ururada shaqaalaha iyo lacagaha hawlgabka si aan u ogaano haddii aan wada-maalgelin karno lacagaha hawlgabka ee ururka shaqaalaha si aan shaqo u abuurno, dhismayaasha cagaarka ah iyadoo la adeegsanayo maalgelinta kicinta,” ayuu sharaxay.
Donnel Baird, maamulaha iyo aasaasaha BlocPower. Xuquuqda Sawirka: BlockPower
Waxay rajaynayeen in xubnaha ururka shaqo la’aanta ah ay ka shaqeeyaan cusboonaysiinta dhismayaasha, laakiin tignoolajiyada ayaa aad u qaali ah wakhtigan 2009, waxayna caddaysay in ay adagtahay in dhaqaalaha uu qof walba u shaqeeyo.
Markii Baird uu ku jiray dugsiga sare ee 2014, wuxuu bilaabay inuu sahamiyo fikradda abuurista qalab maaliyadeed si ay ugu fududaato dad badan inay cusbooneysiiyaan dhismayaasha leh nidaamyada tamarta cagaaran, gaar ahaan xaafadaha saboolka ah. Waxa uu dareemay in la’aanta qalab dhaqaale oo ujeedo loo dhisay oo lagu maalgeliyo mashaariicdan ay tahay meesha ka maqan aragtidiisa nololeed, balse waxa ay u baahan tahay hay’adaha maaliyadeed in ay maal-gashi dibadda ah ka sameeyaan xaafadaha taasoo inta badan bangiyada iyo shirkadaha adeegyada maaliyadeed ay u janjeeraan inay ka fogaadaan. .
“Taasi waa markii aan xaqiiqsaday haddii aan doonayo inaan dhismayaal cagaaran ku dhex sameeyo bulshooyinka dakhligoodu yar yahay, waa inaan aniga laftayda sameeyaa. Intii aan ku jiray dugsiga ganacsiga, waxaan bilaabay qorista qorshe ganacsi iyo kala badh dugsiga ganacsiga, Cheryl Dorseymadaxweynaha Echoing Green Foundationwaxa uu isiiyay $100,000 oo raasamaal abuur ah, waxaana awooday in aan furo shirkadda aniga oo ku jiray sanadka labaad,” ayuu yidhi Baird.
Shirkaddan ayaa maanta siyaabo kala duwan u samaysa lacag, iyadoo ka bilaabaysa agabkii dhaqaale ee uu shirkadda ku saleeyey markii uu fikradda keenay sannadkii 2014-kii.
“Waxaan lacag ka soo amaahannay Wall Street. Waxaan iibsanaa qalabka waxaanan aqoonsannaa qandaraaslaha maxaliga ah ee u qalma inuu rakibo. Ka dibna waxaan maamuleynaa mashruuca marka ay ku rakibaan qalabkaas dhismaha (helitaanka khidmadaha maareynta mashruuca oo qayb ka ah heshiiska). Waxaanan ka kiraynaynaa qalabka, sidaad baabuur u ijaarato, mulkiilaha dhismaha 10 sano, 15 sano ama 20 sano. Oo sidaas daraaddeed waxaa jira lacag bixinno kiro ah oo badan oo shirkaddayada uga soo noqda mulkiilaha dhismahaas,” Baird ayaa sharraxay. Dhaqdhaqaaqa lacag-bixintu waxay siinaysaa shirkadda la saadaalin karo, dakhliga soo noqnoqda.
Intaa waxaa dheer, dawladaha iyo tamarta kiraystaan ​​​​shirkadaha sida BlocPower si ay u dhiirigeliyaan oo ay uga caawiyaan milkiilayaasha dhismaha inay cusbooneysiiyaan nidaamkooda kuleylinta iyo qaboojinta. “Shirkadaha tamarta iyo dawladaha hoose waxay leeyihiin miisaaniyad, sidaas darteed waxay nagu siin doonaan kharashaadka dhismayaasha cagaaran ee bulshadooda,” ayuu yidhi.
Tusaale ahaan, shirkaddu waxay qandaraas kula jirtaa magaalada Ithaca, New York, si ay uga dhigto dhismo kasta oo magaalada ku yaal cagaar. “Dhismaha koronto-siinta waa qayb weyn oo ka mid ah Heshiiska Cagaaran ee Ithaca, mid ka mid ah barnaamijyada kaarboonaynta ugu gardarrada badan ee Gobolka New York. Barnaamijku waxa uu ka faa’iidaysan doonaa dadka deggan Ithaca iyada oo loo marayo shaqo abuurka, kharashyada tamarta yar, hoos u dhigista wasakhowga iyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, iyo guryo iyo dhismayaal tamar wanaagsan leh, “Shirkadda ayaa ku qoray bayaan ku dhawaaqista heshiiska.
Ka degista dhulka
Markii uu dhisay shirkadda, waxa uu damcay in uu maal-gashi dibadeed ka helo, si uu u kaxeeyo, balse ka hor inta aanay taasi dhicin, waxa uu la yimid caddayn fikradeed, sida uu u awoodayna waxa ay ahayd qandaraasyo dawladeed. Midda kowaad waxay ahayd $2 milyan oo deeq ah oo ka timid Waaxda Tamarta. Waxa kale oo uu xidhi lahaa $6 milyan, heshiis saddex sano ah oo 2017 ah oo uu kula jiro Magaalada New York, laakiin waxa uu ogaaday in ku lug lahaanshaha hay’adaha maaliyadeed ay aad u adag tahay.
Shirkaddu waxay awooday inay lacagta deeqda ah ka qaadato NYC iyo Waaxda Tamarta oo runtii muujiso in taageerada dhaqaale ee habboon, ay bilaabi karto inay saameyn dhab ah ku yeelato dhismayaasha cagaaran.
“Marka waxaan qandaraas $2 milyan ah la galnay Waaxda Tamarta taasoo bilawgeyga ku guulaystey hanaan tartan ah. Waxaan lacagtaas u isticmaalnay si aan u dhisno faylalka dhabta ah ee mashaariicda tamarta nadiifka ah annaga oo cagaarinayna sida 40 dhismo, ka dibna waxaan awoodnay inaan u gudbino xogta aan u soo saarnay Goldman Sachs si aan u aragno in moodooyinkayada maaliyadeed ay la socdaan waxa aan aragnay. adduunka dhabta ah,” ayuu yidhi.
Sida ay shirkaddu ku qortay warbixin ku saabsan mashruuca NYC, kaas oo la odhan jiray Dib-u-habaynta Bulshada NYCwaxay ku ururtay meelaha saboolka ah ee Brooklyn iyo Queens halkaas oo bilawga laga yaabo inay la shaqeyso shirkadaha tamarta si ay uga caawiyaan aqoonsiga dhismayaasha u baahan cusbooneysiinta meelahan:
Istaraatiijiyadda BlocPower waxay ahayd in ay ka hawlgeliso daneeyayaasha bulshada kuwaas oo dhamaystiray mashaariicda si ay ugu gudbiyaan mulkiilayaasha dhismaha Community Retrofit NYC iyada oo diiradda la saarayo meelaha leh dhiirigelinta ugu adag ee Con Edison. Talaabada labaad waxay ahayd in la isticmaalo xogta si loo dhiso dhibcaha la beegsanayo si loo aqoonsado dhismayaasha u baahan casriyaynta. Beegsiga, iyada oo lala kaashanayo ka faa’iidaysiga cilaaqaadyada jira, ayaa noo ogolaatay in aan ku xidhno milkiilayaasha dhismaha ee u baahan hagaajin. Waxay sidoo kale noo ogolaatay inaan dhisno shaqsi ka mid ah milkiilayaasheena celceliska ah ee u eg.
Qorshaha asalka ah wuxuu ku baaqay in BlocPower ay la shaqeyso guryaha 554, halkaas oo ay bilaabi lahayd ama si fiican u dhamaystiri lahayd mashruuc, laakiin waxay dhab ahaantii awood u yeelatay inay dhamaystirto mashaariicda 629 dhismayaasha muddada saddexda sano ah ee qandaraaska ee 2017-2019, sida ay shirkaddu sheegtay. Waxay awooday inay horumar ku samayso dhawr siyaabood oo muhiim ah.
Ugu horreyntii, markii ay heshay qaar ka mid ah mulkiilayaasha dhismaha, waxaa jiray eray weyn oo afka ah, taasina waxay ka caawisay in la helo mulkiilayaal badan. Marka labaad, iyadoo la isticmaalayo software-ka shirkadda, kooxdu waxay awooday inay aqoonsato dhismayaasha aadka ugu baahan dib u cusboonaysiinta. Ugu dambeyntii bilawga ayaa sidoo kale abuuray hab aad u habaysan oo loogu talagalay maareynta mashruuca iyada oo la adeegsanayo qaabka dhijitaalka ah.
“Dhismaha waa qaabka dhijitaalka ah ee dhismaha ayaa noo ogolaanaya inaan sameyno asal ahaan hal bog, halkaas oo aan ku hayno qaabka dhijitaalka ah ee dhismaha iyo dhammaan xogtiisa, waxaanan isku dari karnaa dhammaan qaybaha kala duwan ee injineernimada korontada, farsamada injineernimada , dhismaha iyo xogta maaliyadeed oo galay hal profile dhijitaalka ah dhismahaas. Taasi waxay noo ogolaanaysaa inaan ogaano waxa soo-celinta maaliyadeed ay noqon doonto maalgelinta tamarta cagaaran ee dhismahaas, “ayuu yidhi.
Dhanka kale, waxa uu ka soo ururiyay dhawr qaybood oo lacag ah Andreessen Horowitz iyo Kapor Capital. Kii ugu horreeyay wuxuu ahaa $ 1 milyan sannadkii 2015 wax yar uun ka dib markii uu bilaabay shirkadda. Midda xigta waxay ahayd buundo $2 milyan ah oo wareeg ah, taas oo Baird uu sheegay in laga yaabo inuu badbaadiyay shirkadda waqti uu la halgamayay. Labada shirkadood ayaa gacan ka geystay sidii ay shirkadu u bilaabi lahayd ka dibna ay u sii ahaan lahayd ganacsi, ayuu yidhi.
Horey u riixayaan
Iyada oo la raacayo faylalka mashaariicda ee ka hooseeya suunka ee barnaamijyada DoE iyo NYC, waxay bilowday inay albaabada u furto qaar ka mid ah maalgashadayaasha waaweyn, laakiin ma ay fududayn, waxayna qaadatay sannado inay isu keento.
Laakiin sannadkii hore, Goldman Sachs Management Asset Management Urban Investment Group ayaa siisay shirkadda in ka badan $50 milyan si loo maalgeliyo mashaariic dhismo cagaaran oo badan. Laakin ma uusan awoodin in uu helo bangiyada kale iyo hay’adaha maaliyadeed ee kale, iyo niyad-jabka dhaqaale-ururinta waligeed ma dhicin.
Waxa uu sheegay in shirkaddu ay leedahay 860 shaqaale ah, tiradaas oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​800 oo shaqaale ah. Shirkadiisu waxa ay u tababartay rakibidda xalalka tamarta cagaaran. “Waa shaqaalaheenna. Waanu siinaa lacag, waanu ilaalinaa, waanu maamulaynaa. Waxaan sameynaa mashruucyo xiiso leh, sida aan kaarboonaynay kaniisadaha iyo sunagogyada qaarkood. Waxaan dhignay baalal cadceedda Island Island Rikers, xabsiga magaalada New York.”
Waxa uu sheegay in mashruucan dambe uu ahaa mid aad loogu farxo sababtoo ah qaar ka mid ah dadkii uu shaqaaleysiiyay ayaa hal mar lagu xidhay halkaas ama ay garanayeen dad ahaa. “Taasi waxay ahayd mid xiiso leh sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheena ayaa lagu xiray Rikers Island, ama waxay lahaayeen xubno qoys oo lagu xiray Rikers Island, laakiin waxay awoodeen inay halkaas aadaan oo ay sameeyaan wax wanaagsan oo ay ku qaataan mushaharka ka shaqeynta Island Island. ayuu yidhi.
Intii uu jidka kula kulmay dad maalgeliyay aragtidiisa, wuxuu guud ahaan ku tilmaamay lacag ururinta mid “wax laga naxo.”
“Waxaan lahaa dad kaca oo ka baxa shirarka. Waxa aan dadka la soo baxay teleefankooda badhtamaha bandhiggayga oo bilaabay hubintiisa. Waxa aan lahaa dad ay igu baraan casharo ku saabsan hantiwadaaga, iyo sida BlocPower aysan u ahayn hantiwadaaga, iyo sababta oo ah waxaan isku dayeynaa inaan dadka caawinno, waligeen lacag ma sameyneyno.” Maal-gashadayaasha tignoolajiyada cimiladuna ma fiicna, ayuu yidhi, iyada oo mid gaar ah uu ku eedeeyay Baird in uu been sheegay markii uu u soo bandhigay maal-galiyaha xogta ku saabsan mashaariicda uu dhamaystiray.
Waxa uu aaminsan yahay in sida kaliya ee lagu xallin karo dhibaatada maalgelinta ay tahay in dadka ka socda kooxaha aan la matalin si ay u helaan raasumaal oo ay midba midka kale maalgashado. “Ma sugi karno hareeraha oo aan neefta ceshan karno oo nidhaahno, ‘Oh George Floyd ayaa dhacay,’ markaa qaybta raasamaalku waa ay socon doontaa oo isbeddelaysaa…Waxay samayn doonaan waxay sameeyaan. Shaqadeenu waa in aan abuurno koox cusub oo dad ah oo si dhab ah u gaarsiin kara isbeddelka saameynta bulshada ee aan u baahannahay, oo gaarsiin kara isbeddelka cimilada aan u baahanahay,” ayuu yidhi.
In kasta oo caqabadaha jira, BlocPower waxay la timid hab lagu sameeyo dhismooyin waxtar leh, iyada oo abuuraysa shaqooyin wanaagsan oo nolosha ka dhigaysa mid ka sii wanaagsan xaafadaha inta badan laga tago, dhammaantood iyada oo lacag samaynaysa oo ay si sax ah u samaynayso meeraha.